Thierry Henry oo si cad u sheegay in si dhuumaaleysi ah ku daawado kulamada Arenal – Gool FM
Thierry Henry oo si cad u sheegay in si dhuumaaleysi ah ku daawado kulamada Arenal
Dajiye August 23, 2019
(London) 23 Agoosto 2019. Halyeeyga reer France ee Thierry Henry ayaa qiray inuu ku dhuumaaleysto garoonka Emirates si aysan u aqoonsanin taageerayaasha isla markaana si deganaan ah uu ugu raaxeysto kulamada Arsenal.
Thierry Henry ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyay inay ka go’antay dib ugu laabashada xirfadiisa tababarka inkastoo khibrad nasiibdaro ah uu kala kulmay xiligii uu macalinka ka noqday kooxda Monaco, taasoo ugu dambeytii sababtay in xil ka qaadis lagu sameeyo.
Gooldhaliyihii hore ee kooxda Arsenal ayaa ugu horeyn sheegay:
“Waxaan ku guuleystey in kabadan hal jeer inaan ku sugnaado tarbuunka garoonka Emirates, waxaana ku raaxeystay kulamada Arsenal, iyadoo aysan i ogaanin taageerayaasha ama mas’uul ka tirsan kooxda joogitaankeyga”.
“Waxaan jeclahay inaan ku noolaado nolol caadi ah oo aan kala hadlo dadka ciyaaraha kale, tani waxay iga caawisaa maskaxdayda inay furfurnaato”.
Thierry Henry ayaa sidoo kale u soo ciyaaray kooxda Monaco bilowga xirfadiisa kubadda cagta, kaddib wuxuu ku biiray Juventus, wuxuuna sidoo kale qeyb ka mid ah xirfadiisa uu ku biiray naadiga reer Spain ee Barcelona, ​​isagoo kubadda cagta kaga fariistay safka kooxda New York Red Bulls.
Henry oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaas ku sii daray:
“Waxaan rabaa fursad labaad oo aan ku helo shaqada tababarka, waxaad sheegi kartaa inaan waalanahay, laakiin waxaan aaminsanahay inaan noqon doono tababare guuleysta, kam fikirayo xanuunka, waan ka war qabaa in guusha si fudud aysan ku imaanin”.
Macallin Kooxda Arsenal ee Unai Emery oo ka hadlay xaaladda Mesut Ozil & Haddii uu laacibku diyaar u yahay kulanka berri ee Liverpool
“Waan iska dhicin karnaa” – Aubameyang oo xaqiijiyay in Asrenal ay garaaci karto Liverpool kulanka habeen dambe